$100 milyan oo loogu talagalay Barnaamijka Kaalmada Lacagta Ganacsadaha Kelida ah ayaa waxaa la siiyaa ganacsatada kelida ah ee reer Fiktooriya iyada oo aan shaqaaluhu ka shaqaynayn goobta ganacsiga ama meelaha ku dhexyaalla qaybaha mucayinka ah (specific sectors).
Khariidada dib u furida ee Fiktooriya (Victoria’s roadmap for reopening) wuxuu hoosta ka xariiqayaa talaabooyin waari kara oo amaana oo ku wajahan COVID Normal. Ganacsadayaasha kelid ah ee xaqa u leh kuwaas oo uu saamayey xanibaadyada coronavirus waxay heli doonaan deeq dhan $3,000 taas oo loo isticmaali karo kharashka kaga baxaya goobta shaqada.
Araajidu waxay furnaanayaan ilaa lacagtu ka dhammaato ama 11:59 pm ee 30 Diiseembar 2020, hadba kii soo horeeya.
Su’aallaha badanaa la isweydiiyo
Ganacsatada ka shaqaysa nawaaxiga Melbourne
Ganacsiyada aan shaqaalaha lahayn
Ganacsiga ka shaqeeya qaybaha xaqa u leh (an eligible sector) oo la Xanibay, Aadka loo xanibay ama La-xiray kuwaas oo aan xanibaadaha aan laga debcinayn inta u dhexaysa talaabooyinka 1aad iyo 2aad ee khariidada ‘Sidee uga shaqaynaa nawaaxiga Melbourne’ (How we work in metropolitan Melbourne).
Haddii ganacsigaagu ku yaallao Gobolada Fiktooriya, waxaa laga yaabaa inaad xaq u leedahay deeq in qaybaha xaqa u leh (an eligible sector) taas oo Xaniban, Aad u Xaniban ama la xidhay ‘‘Sidee uga shaqaynaa gobolka Fiktooriya’ (How we work in regional Victoria) khariidada.
Ganacsiyada qaybaha xaqa u leh waxaa waajib ku ah inay buuxiyaan shuruuda kale, kuwaas oo lagu muujiyey websaytka Ganacsiga Fiktooriya (Business Victoria website), websaytka Ganacsiga Fiktooriya, si ay xaq ugu yeeshaan deeqda.
Ganacsiyadu xaq uma laha kharajbixinta barnaamijkaan haddii ay helleen deeq hoos imanaysa Business Support Fund, Business Support Fund – Expansion (third round of the Business Support Fund ama Kharajbixinta Goobta Martigelinta ee Laysanka leh (Licensed Hospitality Venue Fund).
Immisa ayay dhan tahay deeqda barnaamijkaani?
Ganacsatada kelidah ee xaqa u leh ayaa helli doonaa $3,000.
Sidee deeq hellayaashu u kharajgareeyaan lacagta la siiyey?
Deeqaha ayaa loo isticmaali karaa in lagu caawiyo ganacsiga si loogu bixiyo kharajyada meelaha hawshu ka socoto sida biilasha ama ijaarka.
Deeqaha ayaa iyagana laga yaabaa in lagu bixiyo:
Raadinta dhaqaale, sharci ama talo kale si loogu taageero qorshaha ganacsiga
Horumarinta ganacsiga iyada loo samaynayo suuqgeyn iyo xarakaadka wada xiriirka ama
Xarakaad kale oo kasta oo kaalmaynaya xarakaadka hawlaha ganacsiga
Maxaa caddayn arjiiluhu u baahan yahay inuu bixiyo?
Waxaa waajiba inaad bixiso:
Nambarka Ganacsiga Australia ((ABN) waxaa waajib ah inuu ku xiran yahay correct Australian and New Zealand Standard Industrial classification (ANZSIC) oo ganacsigaaga asaasiga ah.
Kaagii ugu dambeeyey ee JobKeeper oo ah Ganacsiga Bilaha ah oo Caddaynta aqoonsiga risiitka (Receipt ID) ama nambarka aqoonsiga isku qorida (Aqoonsiga Isku-qorida) kaas oo uu sameeyey xafiiska Australian Taxation Office’s business portal oo muujiya ganacsiga in lacagta la siiyey.
Caddaynta goobtaada ganacsiga ama goobta hoos lagu qoray:
Haddii aad tahay kirayste hadda ah commercial rental agreement oo lix bilood ama ka badan.
Haddii aad tahay qofka ah haysta laysanka licensee – kiraysiga hadda ah ama heshiis lix bilood ama ka badan ah
Haddii aad tahay qofka leh/degan meel mucayina oo ganacsi - 2019 – 20 ama 2020-21
Haddii aad tahay qof diiwaangashan ‘ogolaasha cuntada wareegta (mobile food premises)’ – Ka ganasiga wadadda (Streatrader Statement of Trade) oo hadda ah Ganacsiga Dhinacyada Wadooyinka (Roadside Trading Permit) hadda ah oo ay bixisay Dawlada Hoose, VicRoads ama heshiis kale oo ganacsi si loo isticmaalo goob/bog gaar ah ugu yaraan lix bilood.
Waxaa waajiba inaad xaqiijiso ABN diiwaankaaga macluumaadka iyo, meesha looga baahan yahay, diiwaanka xeeriye oo la xiriira, waana inay isku dubaridan yihiin waqtiga arjiga.
Yaan xaq u lahayn barnaamijkaan?
Ganacsigaagu xaq uma laha haddii:
Waxaad heshay deeq hoos imanaysa Lacagbixinta Kaalmada ganacsiga, Ganacsiga Ballaarinta kharashka, Kharajbixinta 3 ee Kaalmada Ganacsiga (Business Support Fund 3) ama barnaamijyada Kharajbixinta Goobta Martigelinta ee Laysanka leh (Licensed Hospitality Venue Fund)
Ganacsigaagu waxuu ku salaysan amaanad, shirkad ama wax la wadaago
Waxaad tahay ganacsade keliya kumana shaqeeyo goob ganacsi ama rug
Waxaa tahay ganacsade keli ah oo aan qofna shaqaalayn oo ku sugan nawaaxiga Melbourne kaas oo awooda inuu ku furo qorshaha COVIDSafe talaabada ugu horraysa ee Sidaan uga shaqayno nawaaxiga Melbourne (‘How we work in metropolitan Melbourne’) khariidada.
Waxaad tahay qof keligii ganacsada oo aan qof shaqaalaynayn oo ka shaqeeye nawaaxiga Melbourne qaybaha kuwaa soo xanibaadaha la khafiifiyey Talaabada Labaad ee khariidada 'Sidaan uga shaqayno nawaaxiga Melbourne' (How we work in metropolitan Melbourne)
Waxaa tahay qof kelidii shaqeeya oo ku sugan Gobolada Fiktooriya kaas oo awooda in uu dib ugu furo Qorshaha COVIDSafe Talaabada labaad ee khariidada ‘Sidaan uga shaqayno nawaaxiga Fiktooriya' (How we work in regional Victoria).
Ganacsiyada aan xaqa u lahayn ayaa laga yaabaa inay ka helllaan kaalmo kale Fiktooriya Government’s Habka U-dulqaadashada Ganacsiga (Business Resilience Package). Macluumaad intaa ska badan oo ku saabsan ganacsigaaga ayaa isagana laga helli karaa bogga Macluumaadka Ganacsiga ee Coronavirus-ka (COVID-19) oo Ganacsiga Fiktooriya (Business Victoria coronavirus (COVID-19) business information).
Waxaa waajiba inaad ku soo gudbiso online-ka oo ah websaytka Fiktooriya ee Ganacsiga (Business Victoria website).
Dhamaan su’aallaha ku yaalla foomka dalabka (application form) waxaa waajiba in la buuxiyo. Fadlan xaqiiji inaad ku lifaaqdo dhamaan dukuminitiyada la codsaday si loo xaqiijiyo
Macluumaadka aan dhamaystirnayn ama aan si fiican u buuxin waxaa laga yaabaa inay daahiyaan, xaalladaha qaarkood, qiimayn aan si fiican u muuqan.
Goorrma ayaa dalabyadu xirmaayaan?
Dalabyada waxaa la xiri doonaa marka lacagtu ay dhamaato.
Xaggee ayaan ka helli karaa macluumaad ama caawimo lagu buuxiyo dalabkayga?
Wixii caawima ah fadlan nala soo xiriir (contact us) ama wac Business Victoria Khadka ah 13 22 15.
Haddii aad u baahan tahay turjubaan, fadlan wac TIS National oo ah 13 14 50 weydiina Business Victoria Khadka ah (13 22 15). Adeegaan waxaa helli kara qof kasta ama urur kasta oo ku sugan Australia una baahan adeegyada afcelinta iyo tarjumida qoraalka.
Ma jirtaa wax kaalmo ah oo barnaamijyada oo dadka aan wax shaqaalaynayn?
Xukuumada Fiktooriya Habka U-dulqaadashada Ganacsiga (Business Resilience Package) oo ay jiraan barnaamijyada kaalmada oo kale wixii ganacsi ah oo ay saamaysay xanibaadyada la sameeyey si loo hakiyo fiditaanka coronavirus (COVID-19).
Kaalmo siyaada ah ayaa waxaa helli kara ganacsato keli ah iyaga oo maraya Partners in Wellbeing Khadka ah 1300 375 330 kuwa ganacsiga leh oo dareemaya cadaadiska ama ay ka badbadatay.
Bogga Macluumaadka Ganacsiga ee Coronavirus-ka (COVID-19) macluumaadka ganacsiga (Business Victoria coronavirus (COVID-19) business information) ayaa isaguna bixinaya macluumaad kaalmooyin kale iyo tabaha ganacsiyada